Umvelisi we oli waseChina waseShayina uMvelisi kunye nabaNikezeli, Quotes zeMveliso | Xianzhilou
I-Tag Archives: Ukukhupha ioyile
Ubuninzi beGanoderma Lucidum Reishi Mushroom
I-Sigmatic Mushroom yekofu yomxube weGourmet emnyama yeKofu
[Umthombo] Le mveliso iphunyezwa ngokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zeGanoderma Lucidum ukusuka kumzimba omtsha weGanoderma kaLucidum, ngokuqhubeka ngamandla, ukuvavanya, ukomisa, ukugaya. [Imveliso yePropathi] IBrown powder enamavumba akhethekileyo [Umxholo weMveliso] I-polysaccharides ekrwada ≥5% iyonke iTraptpenes ≥0.5% [Indlela yokuvavanya] I-Spectrophotometry (UV) [Into esebenzayo] yeGanoderma Lucidum Polysaccharides, Ganoderma Lucid ...
★ IINJONGO EZIBALULEKILEYO: Ukukhupha i-Musishi kwigumbi lokunyusa ngokwesiko kunceda ukuqinisa amandla omzimba, ukuphucula ukugxila kunye nokukhumbula kunye nokubonisa isibindi. Iipolysaccharides eziqulathwe kwi-Mushi yeRoishi ziyaziwa ngenxa yeempawu zabo zokucotha zokuguga. ★ I-USDA ORGANIC: I-Reishi ye-mushroom ikhula kwihlathi laseNtabeni laseWuyi. I-GANOHERB iqhubela phambili ekuhlakuleni i-Ganoderma ye-organic ganoderma ye-lucidum yecandelo lezorhwebo kubandakanya isiseko sokutyala ngokwakho, ukuqhuba. ukuvelisa ngokupheleleyo ngokwelizwe ...
Amagqabantshintshi e-Lotus anokukuphelisa ngokufanelekileyo ukuthanjiswa kwamafutha, oku kukuqinisekisa ukunciphisa umzimba kunye nokulawulwa kobunzima. I-semen cassiae inemisebenzi yokunciphisa i-serum cholesterol kunye ne-TG. Igqabi leHawthorn linemisebenzi yokukhuthaza ukuhamba kwegazi ngokususa i-stasis yegazi kunye neesureis. I-Oyi yeti inokunciphisa ngokufanelekileyo amanqatha e-subcutaneous, ukuwaphula amanqatha kunye nokugcina ubuhle. Amagqabi eti amnandi asisiselo esifanelekileyo sanamhlanje sokulawula ikhalori kunye nokulawula ubunzima. IGanoHerb iyila iGanoderma ...
I-coq10 coenzyme reishi i-mushroom isusa i-ganoderma lucidum yokufunxa kwempilo yempilo yamandla I-CoQ10 ikwabonelela ngenkxaso ye-antioxidant kwintliziyo, apho igxilwe khona ngokwemvelo. ★ INDLELA YOKUZEZA ISIQINISEKISO KWABASEBENZISAYO-Amanqanaba e-CoQ10 entliziyweni nasemzimbeni anokuqalisa ukwehla ngokwendalo xa sisaluphala. Amandla omzimba okufunxa i-CoQ10 ayancipha ngeminyaka, ngelixa ...
Izinto eziphilayo ze-Ganoderma Sinense Slices Ganoderma Lucidum (reishi) Polysaccharide: Ukunyusa amandla amajoni omzimba, ukunyanzela kunye nokukhusela ukukhula kunye ne-metastasis yesundu, ukulawula uxinzelelo lwegazi, ukuthintela izifo zentliziyo kunye nesifo seengcongconi, ukwenza isebenze njenge-insulin secretion, ukulungisa iswekile yegazi; kunye nokuvelisa i-anti-oxidation kunye neziphumo zokulwa ukuguga, phakathi kwabanye. I-Triterpene Ganoderma Lucidum (reishi) Acid: Ukubonakalisa iziphumo zokuthoba isiselo esinxilisayo, ukukhusela isibindi, nokubulala umhlaza ...
Ijinja ine-gingerol, isiselo esinxilisayo, i-gingerene, i-hydro-aromatic ene, i-zene, i-amino acid, i-niacin, i-citric acid, i-ascorbic acid, iprotein, amafutha, i-thiamine, i-riboflavin, i-carotene, i-cellulose engaqhelekanga kunye ne-calcium, i-iron, i-phosphorus kunye nokunye. I-asidi ye-salicylic kwi-ginger inomsebenzi we-dilution yegazi kunye ne-anticoagulation, ukunciphisa i-lipid yegazi, uxinzelelo lwegazi, igazi kunye ne-myocardial infarction ukukhusela isiphumo sonyango. I-gingerol kwi-ginger ilungile kwi-bile. Kukwakhona anti-ukuguga kunye nokunye ukusebenza ...
Ifowuni : +8615980534308
Reishi ibihlungu Kucatshulwe , Organic Reishi Slice , iGanoderma Lucidum Mushroom , Lingzhi Tea , Reishi Kwamakhowa Kucatshulwe Powder , Kwamakhowa Powder , i- Zonke Products